Home News Ma Mudneen Sidaan Ciyaartoyda 17 jirada Dalka In Sidan Foosha Xun Loola...
Ma Mudneen Sidaan Ciyaartoyda 17 jirada Dalka In Sidan Foosha Xun Loola Dhaqmo
Iyado Maalintii Axadii uu so idladay tartanka 17-jirada ee CECAFA oo ay Soomaaliya kama danbeysta la ciyaartay Dalka Tanzania aya waxa socday dadaaalo lagu dhiri galinayay Dhalinyaradan oo Shacabka qeybaheeda kala duwan oo baraha Bulshada isu dhaafsanayay in Dhalinyradan lo sameyo dhiira galin.
Dhalinyarada oo la filayay soo dhoweyntooda,Dowladana ay balan qaatay in soo dhoweyn heer sare ah loogu sameynayo magaalaada Muqdisho,ayaa qaar ka mid ah Shacabka oo ay Xildhibaano ku jiraan Dowlada ku edeyeyn qaabka ay ula dhaqmeen dhalin yaradan.
Gaadiid lagu xardhay Calanka Soomaaliya oo dhalinyarada oo markii ay ka soo degeen Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho looga soo qaaday laguna soo wareejiyay qeybo ka mid ah magaalada ayaa markii ugu danbeysay waxaa lagu dejiyay Xeebta Liido oo la arkayay iyagoo Bajaaj ka raacaya.
Raii’sul wasaare Kheyre oo u muuqday mid doonayay in uu shashadaha kala soo muuqdo dhalinyaradaasi aya waxa uu ka mid aha masuliyinti so dhaweynta u sameysay.
Waxa wax laga xumaado ah in Dhalinyaradan Matalay Xulka qaranka ee kenay gulajha la taaban karo in ugu badnaan anan qado lo sameyn xafadahodana an lageyn iyado jeebkooda ay ka raaceyn Bajaaj guryahoda u kaxeysa.